Welwelka Xildhibaanada ka qabaan heshiiskii doorashada | KEYDMEDIA ONLINE
Xildhibaanada waqtigooda sii dhamaanaya ee Gollaha Shacabka ayaa ka walaacsan inaysan soo noqon mar dambe, maadaama heshiis cusub ee doorashooyinka gacanta loo geliyay Madaxda Maamul Goboleedyada, oo qofii ay doonaan soo xulaya.
MUQDISHO, Soomaaliya - Heshiiskii doorashooyinka ay Farmaajo iyo Madaxda Maamulada ku gaareey Muqdisho 17-kii bishan ayaa dhalilal walaac xooggan oo soo wajahay Xildhibaanada Baarlamaanka, ee doonaya inay soo laabtaan markale.
Waxaa maalmihii lasoo dhaafay ka socday Caasimadda kulamo Madaxda Maamul Goboleedyada kula yeelanayeen Xildhibaanada degaanadooda laga soo doortay huteellada, iyagoo ku qancinayay heshiiska, kana dalbanayay inay ansixiyaan.
Xildhibaanada oo waqtigooda uga harsan labo bilood ayaa cabsi ka qaba in kuraasta ay ku fadhiyaan hadda lagu bedelo shaqsiyaad kale, maadaama hanaanka dorashadda loo gacan-geliyay Madaxda Maamulla, oo qofkii ay rabaan soo xulaya.
Heshiiska cusub ee doorashadda ayaa dhigaya in labo goobood oo kamid ah Maamul kasta laga sameeyay doorasho, waxaana Xildhibaan kasta soo dooranaya 101 ergo, iyadoo doorashadda uu maamulayo gudi isku dhaf ah, oo DF iyo Maamullada ka kooban.
Waxay dad bada la yaaban yihiin waxa ka socda Soomaaliya kadib markii Farmaajo qalinka ku duugay in Maamul Goboleed uu kaalin ku yeesho hanaanka doorashooyinka qaranka, taasoo ah wax aan aduunka ka dhicin taariikhda.
Dal kasta oo Federaal ah, sida Mareykanka, Itoobiya iyo India waxaa doorashadda awood dastuuri ah u leh kaliya gudiga doorashooyinka qaranka, iyadoo dowladda dhexe ayuu sharciga u ogol yahay inay howshaas qabato.
Doorashadii 2016, waxay ahayd midii ugu musuq-maasuqa badnaa, waxaa jiray kuraas lagu iibsaday in ka badan hal milyan oo dollar. Waa lacagtii ugu badnaa oo codad doorasho lagu iibsado dal sabool ah, oo mudo 30 sano dagaallo kusoo jiray.
Farmaajo ayaa kusoo galay doorashadda 2017 malaayiin dollar oo Qatar bixisay, isagoo xiligaas saxiixay in dalka u gacan gelinayo Doha, oo hadda ku guuleysatay inay Imaaraadka oo colaad kala dhaxayso ka saarto Soomaaliya, iyadoo adeegsanaysa wakiilkeeda Fahad Yaasiin.
0 Comments Topics: farmaajo hanaanka doorashada maamul goboleedyada